မိသားစုဘဝအတွက် အမြဲတမ်းမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်မယ် ဆိုတဲ့ဆုပန်ထွာ
မိသားစုဘဝတစ်ခုကို တန်ဖိုးထားပြီး အမြဲတမ်းမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်မယ် ဆိုတဲ့ ဆုပန်ထွာ
23 Apr 2018 . 12:16 PM
မိသားစု ပုံလေးတွေကိုကြည့်ရင်း သူမတည်ဆောက်ထားတဲ့ မိသားစု ဘဝ အတွက် အမြဲတမ်း မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေပိုမိုခိုင်မာလာပုံကို စာနဲ့တကွ သရုပ်ဆောင်ဆုပန်ထွာက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
“ရုပ်ရှင်တေးကဗျာမဂ္ဂဇင်းအတွက် ပြင်ဦးလွင်မှာ ရိုက်ပေးထားတဲ့မိသားစုပုံလေးတွေရတော့ ရင်ထဲကြည်နူးရတာလေးရော၊ပီတိဖြစ်တာလေးရော၊ယောက်ျာင်္းအပေါ်ခံစားမိတာလေးတေရော၊Roar Roar အပေါ်ချစ်ရတာလေးတေရောရေးချင်မိပါတယ်။ စာရှည်သွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါလို့။ ကိုယ်အပျိုတုန်းကလူပြောသူပြောလွတ်ခဲ့ဖူးပေမယ့် ဒီအိမ်ထောင်လေးတည်ထောင်တဲ့အချိန် အမှန်တရားရှိပေမယ့် လူပြောသူပြောများပြီးကြောက်စရာလောကဓံဆိုတာကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်း ဒီအိမ်ထောင်လေးကိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာနှစ်ယောက်လုံးတည်ထောင်ခဲ့ရပါတယ်။
လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးဘဝတွေပြောင်းပြန်လှန်ပြီးမိသားစုဘဝလေးကိုစခဲ့ရတာမို့တန်ဖိုးကြီးလွန်းပါတယ်။ ဒီပုံလေးတွေရတော့ကြည့်ပြီးရင်ထဲကြည်ကြည်နူးနူးလေးခံစားမိပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မအပေါ်တန်ဖိုးထားချစ်ပြီး၊အိမ်ပေါ်ကဆင်းလာခဲ့တဲ့ကျွန်မရဲ့အိမ်ထောင်ဦးစီးကို တန်ဖိုးထားရင်း၊လေးစားရင်း သူ့ကို Ko Okkar Kyaw ကိုဘာအရာနှင့်မျှမလဲနိုင်တော့ပါဘူး။
ကိုဥက္ကာ ပန်ပန့်ကိုစပြီး Propose လုပ်တုန်းက သူပန်ပန့်ကိုချစ်တာအပြင်တခါတည်းပါလက်ထပ်ချင်တာ၊ပျော်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုလေးသူလိုချင်တာ၊နေချင်တာ လို့ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
သူအရာရာကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီးပန်ပန်နဲ့ဘဝကိုနှစ်ယောက်အတူတူခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ရင်း သူဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝလေးရအောင်သူကြိုးစားဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ ဒီပုံလေးတွေကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း ပန်ပန်သူ့အပေါ်မြင်မိပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်လက်ထပ်ပြီးတော့လဲ ကလေးလေးတစ်ယောက်ချက်ချင်းယူမယ်ပြောလို့၊ ချက်ချင်းကလေးမယူသေးဖို့မနည်းပြောပြခဲ့ရပါတယ်။
ယူပြီး ၆ လနောက်ပိုင်းလတိုင်းဗိုက်ကြီးပီလားမေးမေးပြီး မကြီးသေးဘူးဖြေတိုင်းမျက်ရည်တွေဝိုင်းပြီး ဝမ်းနည်းနေတတ်တဲ့သူ့ကြည့်ပြီးကိုယ်ပါ Baby လေးအရမ်းလိုချင်လာပါတယ်။
အခုလည်းသူအရမ်းလိုချင်လို့ Baby လေးယူခဲ့ရပေမယ့် Roar Roar Kyaw ကိုအခုကျွန်မကပိုချစ်ပါတယ်လေ…ခိ 😂 😂 😂 မိသားစုလေးဖြစ်တည်လာတဲ့အခါပျော်စရာကောင်းတာလေးတွေကဘာမှနဲ့မတူတဲ့စိတ်ခံစားမှူလေးတွေပေးမှန်းသိလာရပါတယ်။ အချစ်ကိုသိပ်မခံစားတတ်တဲ့ကျွန်မချစ်တတ်လာအောင်သင်ပေးခဲ့ပြီလို့လည်းခံစားရပါတယ်။
အခု သားသားကပါ ကျွန်မစိတ်တွေကိုတီတီတာတာနဲ့နူးညံ့တတ်အောင်၊ သည်းခံတတ်အောင်၊ ကိုယ့်ပါးလေးကိုသူ့လက်ကလေး သေးသေးလေးတွေနဲ့ကိုင်ကိုင်ပြီး မားမား မာမား လို့ခေါ်တတ်တာလေးကရင်ထဲပျော်စရာလေး။ သူလုပ်လို့မားမားနာသွားရင်တောင် နာတာကိုစိတ်မဆိုးအောင်အိုင်တင်လေးတွေနဲ့ ချက်ချင်းအရည်ပျော်အောင်လုပ်ပြတတ်နေပါပြီ။
အရင်တုန်းကသူများအန်ရင်ဘေးကနေပျို့ပျို့တက်ပြီးကိုယ်ပါလိုက်အန်တတ်တဲ့ကျွန်မ၊ အခု Roar Roar တခါတလေနေမကောင်းလို့နို့ချဉ်တွေများအန်ရင် ကိုယ်ကလက်နဲ့လိုက်ခံရင်း သားလေးကိုသနားလွန်းလို့အန်ချင်ဖို့နေနေသာသာ ကိုယ်သာဖြစ်လိုက်ချင်တယ်သားရယ်ဆိုပြီးအန်ဖတ်တွေတကိုယ်လုံးရွဲ ချည်ဆော်တေနံရင်းတန်းလန်း မျက်ရည်ကျရတာအခါခါရယ်။
အရင်ကအရမ်းအအိပ်မက်ခဲ့တဲ့ကျွန်မ သားသား တစ်နှစ်နဲ့ခုနှစ်လသာကျော်တာ တစ်ရက်မှညဘက်ကောင်းကောင်းမအိပ်ဖြစ်ဖူးရယ်။ အခုထိ မာမား ဗူးဗူးဆိုတာနဲ့ ငေါက်ကနဲထထိုင်ရင်း သားအတွက်နို့ဗူးထဖျော်တာတောင် သူအားရပါးရနို့စို့တာကိုအိပ်ချင်မူးတူးကြည့်ရင်းပျော်နေတတ်တဲ့ကျွန်မပါ။
တခါတလေဘယ်လောက်ပင်ပန်းပင်ပန်းဘယ်လောက်အိပ်ရေးပျက်ပျက် မိသားစုဘဝလေးကြည်နူးလွန်းလို့ “ချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးပေးထားတဲ့ယောင်္ကျားကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့ပန်ပန်အမြဲပြောတတ်ပါတယ်။
ဘယ်အခြေအနေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်းပြီးတည်ထောင်ခဲ့ရတဲ့မိသားစုလေးမို့……. ကျွန်မယောက်ျားဘက်မှာအမြဲနေပါမယ်! ကျွန်မသားအရှေ့ကအမြဲမားမားမတ်မတ်ရပ်ပါမယ်” ဆိုပြီးတော့ ဆုပန်ထွာ က သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မိသားစုဘဝတဈခုကို တနျဖိုးထားပွီး အမွဲတမျးမားမားမတျမတျရပျတညျမယျ ဆိုတဲ့ ဆုပနျထှာ
မိသားစု ပုံလေးတှကေိုကွညျ့ရငျး သူမတညျဆောကျထားတဲ့ မိသားစု ဘဝ အတှကျ အမွဲတမျး မားမားမတျမတျရပျတညျမယျ ဆိုတဲ့ စိတျဓါတျတှပေိုမိုခိုငျမာလာပုံကို စာနဲ့တကှ သရုပျဆောငျဆုပနျထှာက ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
“ရုပျရှငျတေးကဗြာမဂ်ဂဇငျးအတှကျ ပွငျဦးလှငျမှာ ရိုကျပေးထားတဲ့မိသားစုပုံလေးတှရေတော့ ရငျထဲကွညျနူးရတာလေးရော၊ပီတိဖွဈတာလေးရော၊ယောကျြာင်္းအပျေါခံစားမိတာလေးတရေော၊Roar Roar အပျေါခဈြရတာလေးတရေောရေးခငျြမိပါတယျ။ စာရှညျသှားရငျခှငျ့လှတျပါလို့။ ကိုယျအပြိုတုနျးကလူပွောသူပွောလှတျခဲ့ဖူးပမေယျ့ ဒီအိမျထောငျလေးတညျထောငျတဲ့အခြိနျ အမှနျတရားရှိပမေယျ့ လူပွောသူပွောမြားပွီးကွောကျစရာလောကဓံဆိုတာကို ကွံ့ကွံ့ခံရငျး ဒီအိမျထောငျလေးကိုခကျခဲကွမျးတမျးစှာနှဈယောကျလုံးတညျထောငျခဲ့ရပါတယျ။
လငျမယားနှဈယောကျလုံးဘဝတှပွေောငျးပွနျလှနျပွီးမိသားစုဘဝလေးကိုစခဲ့ရတာမို့တနျဖိုးကွီးလှနျးပါတယျ။ ဒီပုံလေးတှရေတော့ကွညျ့ပွီးရငျထဲကွညျကွညျနူးနူးလေးခံစားမိပါတယျ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ကြှနျမအပျေါတနျဖိုးထားခဈြပွီး၊အိမျပျေါကဆငျးလာခဲ့တဲ့ကြှနျမရဲ့အိမျထောငျဦးစီးကို တနျဖိုးထားရငျး၊လေးစားရငျး သူ့ကို Ko Okkar Kyaw ကိုဘာအရာနှငျ့မြှမလဲနိုငျတော့ပါဘူး။
ကိုဥက်ကာ ပနျပနျ့ကိုစပွီး Propose လုပျတုနျးက သူပနျပနျ့ကိုခဈြတာအပွငျတခါတညျးပါလကျထပျခငျြတာ၊ပြျောစရာကောငျးတဲ့မိသားစုလေးသူလိုခငျြတာ၊နခေငျြတာ လို့ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။
သူအရာရာကိုစှနျ့လှတျခဲ့ပွီးပနျပနျနဲ့ဘဝကိုနှဈယောကျအတူတူခကျခကျခဲခဲကွိုးစားရငျဆိုငျကြျောဖွတျရငျး သူဖွဈခငျြတဲ့ဘဝလေးရအောငျသူကွိုးစားဖနျတီးခဲ့တယျလို့ ဒီပုံလေးတှကွေညျ့ရငျးကွညျ့ရငျး ပနျပနျသူ့အပျေါမွငျမိပါတယျ။ မင်ျဂလာဆောငျလကျထပျပွီးတော့လဲ ကလေးလေးတဈယောကျခကျြခငျြးယူမယျပွောလို့၊ ခကျြခငျြးကလေးမယူသေးဖို့မနညျးပွောပွခဲ့ရပါတယျ။
ယူပွီး ၆ လနောကျပိုငျးလတိုငျးဗိုကျကွီးပီလားမေးမေးပွီး မကွီးသေးဘူးဖွတေိုငျးမကျြရညျတှဝေိုငျးပွီး ဝမျးနညျးနတေတျတဲ့သူ့ကွညျ့ပွီးကိုယျပါ Baby လေးအရမျးလိုခငျြလာပါတယျ။
အခုလညျးသူအရမျးလိုခငျြလို့ Baby လေးယူခဲ့ရပမေယျ့ Roar Roar Kyaw ကိုအခုကြှနျမကပိုခဈြပါတယျလေ…ခိ 😂 😂 😂 မိသားစုလေးဖွဈတညျလာတဲ့အခါပြျောစရာကောငျးတာလေးတှကေဘာမှနဲ့မတူတဲ့စိတျခံစားမှူလေးတှပေေးမှနျးသိလာရပါတယျ။ အခဈြကိုသိပျမခံစားတတျတဲ့ကြှနျမခဈြတတျလာအောငျသငျပေးခဲ့ပွီလို့လညျးခံစားရပါတယျ။
အခု သားသားကပါ ကြှနျမစိတျတှကေိုတီတီတာတာနဲ့နူးညံ့တတျအောငျ၊ သညျးခံတတျအောငျ၊ ကိုယျ့ပါးလေးကိုသူ့လကျကလေး သေးသေးလေးတှနေဲ့ကိုငျကိုငျပွီး မားမား မာမား လို့ချေါတတျတာလေးကရငျထဲပြျောစရာလေး။ သူလုပျလို့မားမားနာသှားရငျတောငျ နာတာကိုစိတျမဆိုးအောငျအိုငျတငျလေးတှနေဲ့ ခကျြခငျြးအရညျပြျောအောငျလုပျပွတတျနပေါပွီ။
အရငျတုနျးကသူမြားအနျရငျဘေးကနပြေို့ပြို့တကျပွီးကိုယျပါလိုကျအနျတတျတဲ့ကြှနျမ၊ အခု Roar Roar တခါတလနေမေကောငျးလို့နို့ခဉျြတှမြေားအနျရငျ ကိုယျကလကျနဲ့လိုကျခံရငျး သားလေးကိုသနားလှနျးလို့အနျခငျြဖို့နနေသောသာ ကိုယျသာဖွဈလိုကျခငျြတယျသားရယျဆိုပွီးအနျဖတျတှတေကိုယျလုံးရှဲ ခညျြဆျောတနေံရငျးတနျးလနျး မကျြရညျကရြတာအခါခါရယျ။
အရငျကအရမျးအအိပျမကျခဲ့တဲ့ကြှနျမ သားသား တဈနှဈနဲ့ခုနှဈလသာကြျောတာ တဈရကျမှညဘကျကောငျးကောငျးမအိပျဖွဈဖူးရယျ။ အခုထိ မာမား ဗူးဗူးဆိုတာနဲ့ ငေါကျကနဲထထိုငျရငျး သားအတှကျနို့ဗူးထဖြျောတာတောငျ သူအားရပါးရနို့စို့တာကိုအိပျခငျြမူးတူးကွညျ့ရငျးပြျောနတေတျတဲ့ကြှနျမပါ။
တခါတလဘေယျလောကျပငျပနျးပငျပနျးဘယျလောကျအိပျရေးပကျြပကျြ မိသားစုဘဝလေးကွညျနူးလှနျးလို့ “ခဈြစရာကောငျးတဲ့သားလေးပေးထားတဲ့ယောင်ျကြားကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ” လို့ပနျပနျအမွဲပွောတတျပါတယျ။
ဘယျအခွအေနဘေယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ဘဝတဈခုလုံးနဲ့ရငျးပွီးတညျထောငျခဲ့ရတဲ့မိသားစုလေးမို့……. ကြှနျမယောကျြားဘကျမှာအမွဲနပေါမယျ! ကြှနျမသားအရှကေ့အမွဲမားမားမတျမတျရပျပါမယျ” ဆိုပွီးတော့ ဆုပနျထှာ က သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျမှာ ရေးသားဖျောပွခဲ့တာဖွဈပါတယျ။